ဖွတ်ဖွတ်ကိုကြေလို့ – Grab Love Story
ဒီမှာကိုထွေး ချစ်တာကချစ်တာ စည်းကမ်းကစည်းကမ်းဘာမှမဆိုင်ဘူး မနက်ဖန် တရက်လေးတောင်ရှင် မစောင့်နိုင်ဘူးလား ဟင်…….သက်ရယ် မနက်ဖြန်ဆို ဟိုကောင်အောင်ကြီးရဲ့မင်္ဂလာအ၀င်နေ့ ပါဆိုမှ
ကိုပြန်အိပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးသူ့မိန်းမရွာကလဲဒီမြို့နဲ့က အဝေးကြီး ကိုတို့သူငယ်ချင်တွေ အားလုံး မင်္ဂလာပြီးမှ ပြန်ရမယ်လို့ အစထဲက
ပြောပြီးသားပါဆိုနေမှရော။လုပ်ပါကွာ နော်….နော်..မရဘူး သက်က စည်းကမ်းကို မဖျက်နိုင်ဘူး မနက်ဖန် ည ကိုထွေးပြန်လာရမယ် ဘယ်လောက်ဝေးဝေး ဆိုင်ကယ်နဲ့ဘဲနောက်မနက်မှ
စောစောပြန်သွားပေါ့ ဖယ်စမ်းပါ ဒီလက်ကြီးက ဒီနို့ဘဲလာလာနှိုက်နေတာကျမကိုထွေးရဲ့လက်ကို
ပုတ်ချတယ် ဒါပေမဲ့ မရပါဘူး ကိုထွေးက ကျမကိုနမ်းတယ် ကစ်စ်ပေးတယ် နို့တွေကိုကိုင်တယ်ပြီးတော့ကျမလက်တဘက်ကို
ကိုင်ပြီးသူ့လီးကိုစမ်းခိုင်းတယ် .. .. ….ဟင့်အင်းကွာ….နက်ဖန်ဆို..
တရက်လေးစောပေးရတာများ ဘာဖြစ်မှာကျနေတာဘဲ….ဒီမှာ တင်းနေပြီကိုင်ကြည့်စမ်းပါ သက်ရယ်…
ကိုထွေး, သက်ကိုရှင်ယူထားတဲ့မိန်းမဘဲ ဆိုပြီး နိုင်ထက်စီးနင်းပြုချင်တာလား ….. လာမလုပ်နဲ့သက်မကြိုက်ဘူး သက်ကိုဘယ်လိုမိန်းမမျိုးလို့ရှင်ထင်နေသလဲ….
ကျမ အော်လိုက်တော့ ကိုထွေးလန့်သွားပုံရသည်ရှက်လဲရှက်သွားပုံဘဲ ပါးစပ်အဟောင်းသားဖြင့် မျက်နှာကြီးတခုလုံးရဲလို့ကိုထွေးကအသားဖြူတော့သိသာလှသည် ဒါပေမဲ့လဲ ကျမကတော့ မလျှော့နိုင်ပါဘူးဘယ်တုံးကမှလဲမလျှော့ခဲ့ဘူးဘူး။ဟာ,…သက်…ကိုထွေးနဲ့သက် ကတရားဝင်လင်မယားတွေပါသက်ကို ကိုထွေး တတ်နိုင်သလောက် ပြည့်ပြည့်စုံစုံထားပေးနေတာပါဘဲသက်ဘာတွေလိုအပ်နေသေးလို့လဲကိုထွေးစိတ်အရမ်းပျက်လာပြီ သက်ကအရမ်းလှတယ်လှသလောက်ကိုထွေးအပေါ်အရမ်းရက်စက်တယ်သူများလင်မယားတွေလဲ ဒီလိုဘဲလားဆိုတာ သက်လေ့လာကြည့်စမ်းပါ ကိုထွေးအရမ်းချစ်တယ် ဒါကြောင့်လဲအရမ်းသက်အလိုကိုလိုက်ခဲ့တယ် ဒါပေမဲ့ ကိုထွေးတို့လင်မယားဘ၀ကဘာမှအဓိပ္ပါယ်မရှိတော့ဘူး….သိလား….သက်လှတာမက်ယင် ညတာခက်မယ်ဆိုတာ ကိုထွေးအတွက်တော့တကယ်ဘဲဖြစ်နေပြီလား အေးပါ လေရပါတယ် ငါ့ဘ၀နဲငါဘဲရှိပါစေတော့ အိပ်တော့မယ် ။
ယောက်ကျားများ အတော်ခက်တယ်သူတို့လိုတာမရလျှင်စိတ်ဆိုးကြ စိတ်ကောက်ကြတာဘဲ ကောက်လေကောက်ပေါ့တသက်လုံးပေါင်းရမှာ သူ့အလိုကို တခါလိုက်မိလျှင် နောက်တသက်လုံးလိုက်ရတော့မှာပေါ့ကျမတို့ အိမ်ထောင်ကျတာ နှစ်နှစ်ကျော်ကျော် သုံးနှစ်ထဲရောက်ခဲ့ပြီ ဒါပေမဲ့ ကျမကိုယ်ကျမအိမ်ထောင်သည်လို့ကိုလုံးဝ မထင်ဘူး ကျမ လှချင်တယ် လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေချင်တယ်ကျမကို လာမချုပ်ချယ်နဲ့ ကျမလုံးဝမကြိုက်ဘူး နေရာတိုင်းမှာကျမကသာဆရာဘဲ ကျမကအမိန့်ပေးရမှကြိုက်တယ်ခုလဲကြည့်လေ ကျမယောက်ျားကို တပါတ်မှတခါဘဲ ပေးတယ် ဘာလို့ဆို ကျမကလှချင်တယ်လေကျမအလှပျက်မှာစိုးတယ် ကျမတို့မိန်မတော်တော်များများဟာယောင်္ကျားရပြီးလျှင်အလှပျက်သွားတတ်ကြတယ် မိမိအလှကိုရေရှည်မထိန်းသိမ်းတတ်ကြဘူး ။အဲသလို မိန်းမတွေထဲကျမအပါမခံနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်လဲ ကိုထွေးမိဘတွေနဲ့ အတူနေနေတာကို၊တအိုးတအိမ်ထူထောင်ကြမယ်ဆိုပြီးပူဆာခဲ့တာပေါ့ ကိုထွေးကလဲကျမကိုချစ်ရှာပါတယ်ခုတော့ရတဲ့
စုကြေးလေးနဲ့ ဒီမြို့သစ်က အထပ်မြင့် အိမ်ရာမှာ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းလေး တခန်းဝယ်ပေးရှာပါတယ် ကျမလိုချင်တာကတော့ မြေညီထပ်ကထောင့်ခန်းပေါ့ ဒါပေမဲ့ ရှိတဲ့ပိုက်ဆံနဲ့က မြေညီ ထပ်တော့မရဘူး ဒုတိယထပ်ထောင့်ခန်းလေးရလိုက်တယ်လေ
အကျယ်ကြီး အိပ်ခန်းကတခန်း ၊မီးဖိုတခန်း ၊ဧည့်ခန်းကလဲပါသေးတယ်ဆိုတော့ ကျမပျော်ပါတယ် ။ထောင့်ခန်းလေး ဆိုတော့ လေကောင်းလေသန့်ကလဲရတယ်လေ
အခန်းချင်းကပ် တဘက်ခန်းကတော့ လူတွေမရောက်ကြသေးဘူးအဲဒါကြောင့် အိမ်လည်လို့တော့ မရသေးဘူးပေါ့ အိမ်မှုကိစ္စလေးတွေလုပ် နေ့ လယ်နေ့ခင်း တရေးတမောအိပ်ဝတ္ထုစာအုပ်လေးဖတ်ဇိမ်ကိုကျနေတာပါဘဲ ကိုထွေးကပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတခုက အငယ်တန်းစာရေးပါ တခါတလေကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကိစ္စနဲ့လူမှုရေးရှိလို့ခွင့်ယူတာကလွဲလျှင် သူ့မှာ တရက်လေးတောင် ပိတ်ရက်မရှိဘူး
ကျမတယောက်ထဲတနေကုန်အိမ်မှုကိစ္စလေတွေလုပ် ကိုယ်ကိုယ်ကိုအလှပြင် . အိုပျင်းချိန်တောင်မရပါဘူးကျမပျင်းတာကတော့ လင်မယားနေရမှာကိုဘဲ ၀တ္တရားအရမှို့သာ သူ့ကို လိုက်လျှောနေရတာ ဒီလိုရှက်စရာ ကိစ္စတွေကိုဘာလို့များ လုပ်နေချင်ကြပါလိမ့်နော်။
ပြီးတော့လဲ ဘာမှလဲမဟုတ်ဘူး သူတို့ပြီးသွားရင် ကိုယ်မှာဖြင့် စေးတိစေးကပ် စိုတိစိုစက်နဲ့နေရထိုင်ရခက်တာဘဲ အဖတ်တင်တယ်သူတို့ကတော့ ဆန္ဒပြည့်ဝသွားတော့ တဘက် လှဲ့ပြီးတချိုးထဲ အိပ်တော့တာပါဘဲ သူတို့ဘယ်လောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာတော့ ကျမ မသိဘူးကျမသိတာကတော့ကောင်းသလိုလိုတော့
ရှိပါတယ် ဒါကလဲ တကယ်ကောင်းလား ဆိုတော့ဘာအရသာမှကို မသိလိုက်ရပါဘူး ကျမတို့ အမျိုးသမီးတွေဘာလို့ယောက်ျားယူကြ တာလဲ ကျမကတော့ကိုထွေးကိုချစ်တာတခုထဲနဲ့ဘဲ ယူခဲတာပါ ခုတော့သူ့အလိုးခံဖို့ယူထားရသ လိုဘဲ
သူ့အလိုကို လိုက်မိလျှင် အလိုးခံရတော့ တာပါဘဲသူလိုးလို့အားရသွားလျှင်ဘာမှသန့်ရှင်းရေးလုပ်မပေးဘူးပြီးတော့သန့်သန့်ရှင်းရှင်းနေတတ်တဲ့ကျမကတော့နေရခက်တယ် ကိုယ်ဟာကိုဘဲ ရေထထပြီးဆေးရတယ်။
သြော် ၀တ်ကြွေး ၀တ်ကြွေး ဒါနဲ့များ
တပါတ်တစ်ခါတောင် များလှပြီ တစ်လမှ
တစ်ခါလောက်ဘဲပေးလုပ်သင့်တယ် ခုလဲကြည့်လေ နက်ဖန်မှတပါတ်ပြည့်မှာကိုတရက်စောလုပ်ချင်သတဲ့ ပေးရအုံးမယ်အားကြီးကြီးမနက်ဖြန်သူ့သူငယ်ချင်းရဲ့မင်္ဂလာလိုက်သွားမှာတဲ့လေးဟိုမှာညအိပ်လျှင်လဲ ကျမသက်သာတာပေါ့ဝမ်းတောင်သာသေး ဒါပေမဲ့မနေပါဘူး ကျမသိတာပေါ့ဘယ်တုန်းကမှ မနေဘူးဘူး ဒီစောက်ဖုတ်လောက်လုပ်ချင်နေတဲ့
သူဘဲ ဒီတရက် မလုပ်လျှင်နောက်တပါတ်မှ
လုပ်ရတော့မှာပေါ့ ကျမကအဲသလိုသတ်မှတ်ထားတာလေ ခဲမှန်ဘူးတဲ့စာသူငယ်လိုဘဲ ကျမကအ၀ါကဒ်ပြလိုက်လျှင် သူ့ခမျာပြာယာခတ်သွားတော့တာပေါ့ ကြည့်ထား မနက်ဖန် သူပြန်မလာဘဲ မနေပါဘူး
* ကောင်းဆက်နိုင်ကုမ္ပဏီ** “ကောင်းဆက်နိုင်ကုမ္ပဏီ၏မန်နေဂျာရုံးခန်းထဲ၌
အပြီးလုပ်ရမယ်လို့ သူဌေးကြီးဦးးကောင်းဆက်နိုင် ကညွှန်ကြားထားသောကြောင့်ဖြစ်လေသည် မနက်ဖန်ဆိုလျှင်သင်္ဘောတင်ရတော့မည် အချိန်ကားည ၈ နာရီထိုးနေပေပြီပွဲရုံမှ အလုပ်သမားများတော့ပြန်လွှတ်လိုက်ပြီဖြစ်သည်ကိုညိုမောင်ကတော့ ဒီနေ့လဲအိမ်ပြန်အိပ်ဖို့လမ်းမမြင် စာရင်းတွေကမပြတ်သေး ဒီစာရင်းတွေကို ဒီည အပြီးလုပ်ရမည်မအိပ်ရလဲကိစ္စမရှိ လုပ်ငန်းပြီးစီးဖို့ကသာ အရေးကြီးသည် ။ကိုညိုမောင်က ရိုးသား သည်ကြိုးစားသည် ထို့ကြောင့် သူဌေးကြီးဦးကောင်းဆက်နိုင်က
စာရင်းကိုင်မှ ပွဲရုံမန်နေဂျာ အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်
ခန့်ထားလေ၏ကိုညိုမောင် အဖို့မန်နေဂျာ ရာထူးရပြီးမှ အလုပ်ပိုရှုပ်တော့သည် နံက်စာ နေလယ်စာနှင့် ညနေစာ တို့ကိုလဲပွဲရုံကဘဲ
ကျွေးနေတော့ အိမ်ပြန်ချိန်ကအတော်နည်းလှသည် အိမ်မပြန်ရတာ ၅ ရက်တောင်ရှိပြီအိမ်ကမိန်းမကို သတိယလှပြီဖြစ်လေသည် ။ နိုင်ငံခြားအိပ်စပို့များပြီးသွားလျှင်တော့ အိမ်ပြန် နှပ်နေလိုက်အုံးမည် ဒီအချိန်မျိုးမှာလက်ထောက်မန်နေဂျာလှမျိုးနဲ့
လွှဲထားလို့ရသည် မနက်ဖန်ညဆိုလျှင် အိမ်ပြန်လို့ရလောက်သည် အိမ်ကမိန်းမနဲ့မတွေ့ရသည်မှာလဲကြာပြီ။
ပွဲရုံနှင့်အိမ်ကအတော်သွားရသည် အိမ်ကမြို့သစ်မှာ အိမ်ဆိုပေမဲ့အထပ်မြင့်အိမ်ယာမှ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းတခန်း သာဖြစ်သည် အလုပ်သမားခေါင်းဘ၀က၀ယ်ထားခဲ့တာပါ မြေညီထပ်မှာတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့သုံးထပ်မြောက်မှာ ထောင့်ခန်းလေးတော့ ရထားတယ်လေ၀င်လေထွက်
ကောင်းတယ်သားသမီးနှစ်ယောက်နဲ့ဆိုတော့မကျဉ်းလွန်း မကျယ်လွန်ပါဘဲယခုတော့ မန်နေဂျာဖြစ်နေပြီဆိုတော့
လစာကလည်းမြင့်လာပြီလေ မိသားစုသုံး လောက်ငှရုံ မကအပိုငွေလေးတွေလဲ
စုမိဆောင်းမိနေလေတော့ မိသားစုအတွက်မပူမပင်ရတော့ဘူး သူဌေးကြီးဦးကောင်းဆက်နိုင်ရဲ့ကျေးဇူးကား
ည ၈ နာရီတောင်ကျော်လာပြီ ကိုထွေးပြန်မလာသေးဘူး မနေ့ကကျမကို စိတ်ကောက်အိပ်သွားတာ ကျမလဲပြန် မချော့ခဲ့မိဘူး စိတ်ကတော့ မကောင်းပါဘူးကျမကလွန်များ
သွားပြီလား ကိုထွေးကစိတ်ကောက်လျှင် နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်တော့ကောက်တတ်သည်
ဒါပေမဲ့ ညအိပ် ညနေတော့ သူ တခါမျှမနေဘူးပါဘူး ပြန်မလာမှာကိုတော့စိုးရိမ်မိသား ပြန်မလာလျှင် ကျမတယောက်ထဲအိပ်ရမှာပျင်းစရာကြီးသူ
စိတ်ကောက်သွားတာတော့ သေချာသည် ဘာလို့ဆို
မနက်ကအစောကြီး ထွက်သွားတာ ကျမကိုတောင်နှိုးမသွားဘူးကျမအိပ်ယာထတော့ သူကိုင်နေကျ အိမ်သော့လဲယူမသွားဘူး ကျမတို့ လင်မယားက အိမ်သော့ကိုတယောက် တချောင်းကိုင်ကြတာလေ ဒါမှကျမအပြင်သွား ဈေးသွားလို့ကျမ မရှိတဲ့အချိန်သူအိမ်လာလျှင်
အဆင်ပြေမှာပေါ့ တခါတလေ သူအိမ်ပြန်နောက်ကျတတ်တယ်။
ဒီအချိန်မျိုးဆို ကျမကအိပ်ပြီ ဒီတော့ကျမကို မနှိုးရတော့ဘူးပေါ့ဒီနေ့တော့ခက်ပြီ သော့ကိုလဲယူမသွားတော့TVကြည့်ယင်းထိုင်
စောင့်နေရတော့ မှာ ညနက်မှပြန်လာလျှင်တော့ ခက်ပြီ ကျမက၉နာရီဆိုလျှင်အိပ်ချင်ပြီ အိပ်ယာထဲဝင်ပြီးလျှင်လဲမထချင်တော့ဘူး
မှတ်တိုင်ပါတယ် ဆရာရေ့ စပါယ်ယာ၏အော်သံနှင့်မရှေးမနှောင်းမှာအမှတ် ၈.လိုင်းကား မှတ်တိုင်ရှေ့မှာငြိမ့်ကနဲထိုးရပ်သွား၏
ည ၉နာရီကျော်ပြီ သည်ကားကမြို့သစ်
ကိုရောက်တဲ့နောက်ဆုံးကား သည်ကားမှမမှီလျှင် ဖယ်ရီငှါးရတော့မည် ပွဲရုံမှာလုပ်ငန်းများကို လက်စသတ်ပြီး မနက်ဖြန်ဝင်မည့်ကုန်တွေအတွက် လှမျိုးကိုသေချာမှာထားခဲ့ရသေးသည် ။
မနက်ဖြန်တရက်လောက်တော့နားချင်သေးသည် သူဌေးကြီးလဲ အိပ်စပို့အတွက် ဒီမနက်ကဘဲစင်ကာပူကိုသွားလေပြီအနဲဆုံး
လမ်းလျှောက်တော့ အထပ်မြင့်ကွန်ဒိုတိုက် မြေညီထပ်လှေကားခြေရင်းသို့ရောက်လာလေသည် လှေခါးပေါ်တက်ရင်းတိုက်ပုံအိင်္ကျီထဲမှသော့ ကို
နှိုက်ယူလေ၏သော့ကွင်းလေးကို လက်ညှိုးစွပ်၍လှည့်လိုက်လေသည် စိတ်တွေကပေါ့ပါးနေလေသည်အလိုပြည့်တောမှာကိုးချစ်မယားလေးကတော့အိပ်ပျော်နေလောက်ပြီ ဒီနေ့တော့ကောင်းကောင်းကြီးကို ပြုစုလိုက်အုံးမယ် အတွေးနဲ့ပင်လျှင် ပုဆိုးထဲမှလီးကြီးတောင်ထ
လာလေ၏ ဒုတိယထပ်အလွှာအရောက်၌ လက်ညှိုးထဲမှသော့ကွင်းလေးလွတ်ထွက်သွားပြီး လှေကားအောက်ပြုတ်ကျလေတော့ သည် ။
ကိုညိုမောင် စိတ်ကသိပ်မရှည်တော့ အရေးကြောင်းဒိန်းဒေါင်းဖျက်ဆိုသလို လီးကလဲ တောင်လှပြီ တော်ပြီ မနက်မှဘဲလာ ရှာတော့မည် စိတ်ကမြန်နေသည်အိမ်ခန်းတော်တော်များများက
TVကြည့်သူတွေကကြည့်နေ တချို့အိမ်ခန်းတွေကလဲ လူတွေကမရောက်ကြသေးဆိုတော့ အပြင်မှာလူခြေက တိတ်နေလေပြီ ကိုညိုမောင်တို့အိမ်ခန်းကတတိယထပ် သည်လှေကားပေါ်တက်လိုက်ဆင်းလိုက်လုပ်ယင်းနဲ့သူဘယ်အထပ်ရောက်နေပါလိမ့်ခေတ္တစဉ်းစားယင်း သူ့အိမ်ခန်းရှိရာယာဘက်ကိုချိုးကွေ့လိုက်သည် ရောက်ပါပြီယာဘက်အစွန်းထောင့်ခန်းက
ကိုညိုမောင်တို့အိမ်ခန်းပါ ။အမှန်တကယ် ကိုညိုမောင်ရောက်နေတာကဒုတိယထပ်မှာပါ ကိုညိုမောင်တခါးကိုခေါက်လိုက်သည် ဒေါက်…..ဒေါက်….ဒေါက်….အတွင်းကဘာသံမျှ
မကြားရတံခါးလက်ကိုင်ဘုလေးကိုလှည့်လိုက်တော့အတွင်းကသော့ခတ်မထားပါဘူး တံခါးကပွင့်သွားလေပြီ ကိုညိုမောင်အိမ်အတွင်းဝင်လိုက်ပြီ တံခါးလော့
ခလုပ်လေးကို နှိပ်ပြီးပြန်ပိတ်လိုက်သည် ။
အိပ်နေတဲ့ မိန်းမကိုတွေ့ရလေသည် သူမအိပ်ပျော်နေပြီလား မသိ အိပ်ပျော်နေတဲ့သူကို စောက်ဖုတ်ကို အယင်ရက်ပေး
လိုက်အုံးမယ် ဟုစိတ်ထဲမှကြုံးဝါးလိုက်လေ၏ ။
ကိုထွေးက မလာသေးသဖြင့် စိတ်ချလက်ချ အိပ်မရပါဘူးအိပ်တ၀က် နိုးတ၀က်ပါဘဲ ထိုအချိန် တံခါးခေါက်သံကြားလိုက်ရပါတယ် သြော် သူပြန်လာပြီကိုးတံခါးခေါက်မှာပေါ့ သူမှ သော့မပါတာကျမသော့ခတ်မထား ဘူးလေ သူသိမှာပါကိုယ်တော်ချောက ကျမရှိတဲ့ အိပ်ခန်းဘက်ကိုတန်းလာတော့တာပါဘဲ ကျမလဲစောင်ခေါင်းမြီးခြုံပြီးအိပ်ချင်ယောင်
ဆောင်နေလိုက်တယ် သူ ချက်ချင်းကုတင်ပေါ်
တက်လာတော့တာဘဲဟင်း…ဟင်း ရယ်စရာ ဘဲ မနက်ကတော့ကောက်တော်မူနေပြီး ခုတော့ နေနှိုင်သေးလား အိုး..ကျမခေါင်းမြီးခြုံထားတာကို ခေါင်းကစမလှန်ပါဘဲ ခြေထောက်ကစလှန်တယ် အင်း…သူဘာလုပ်မယ်ဆိုတာ ကျမသိတာပေါ့ထင်ထားတာက ကျမကိုနှိုးမယ် အနမ်းတွေပေးမယ် ပတ်ချွဲနတ်ချွဲတွေလျှောက်ပြောမယ် ပေါ့၊ ခုတော့ဘာဒီဇိုင်းတွေဖမ်းနေတာလဲမသိစကားတခွန်းမျှ မပြောဘဲနဲ့ အံ့ပါရဲ့ နေပါ့စေအုံး သူ့ဟာကြီးကို မိအောင်ဖမ်းဆွဲပြီး မှတ်လောက်သားလောက်အောင် လိမ်ချိုးထားလိုက်အုံးမယ် ။
ကိုညိုမောင် ခြေထောက်ဘက်ကစောင်ခြုံကို မပြီးခေါင်းတိုးဝင်လိုက်လေသည် မိန်းမရဲ့ ခါတိုင်းနဲ့မတူတဲ့အမွှေးနံ့က ကိုညိုမောင်၏ ရမက် ကိုပိုမို နှိုးဆွသလိုခံစားရလေသည်။
စောင်းစောင်းလေးအိပ်နေတဲ့မိန်းမကို ပက်လက်ဖြစ်အောင်လှဲ့ပြီး ထမိန်ကြားခေါင်းဝင်ကာ စောက်ဖုတ်အကွဲကြောင်းလေးကိုစတင်၍လျှာဖျား
ဒီနေ့ ကိုထွေးရဲ့အပြုအမူတွေက အရမ်းထူးဆန်းနေပါတယ် ခါတိုင်းထမိန်ကိုလှန်ပြီး တန်းလိုးတဲ့သူက အဆန်းတွေထွင်နေပါလား ဘုန်းနိမ့်မှာကြောက်လို့ ထမိန်ကိုတောင်သိပ်မကိုင်ချင်တဲ့သူက ။
ဘယ်လိုမှ ထင်မှတ်မထား ဘဲ ရုတ်တရက် သူ့လျှာကြီးနဲ့ ကျမရဲ့စောက်ဖုတ်အကွဲကြောင်းထဲကို ထိုးထဲ့ခံလိုက်ရတယ် ကျမဘယ်လိုဖြစ်သွားမှန်းကို မသိတော့ပါဘူး ။
ကျမ အတွေးနဲ့ အကြံတွေလဲ ဘယ်ရောက်သွားမှန်းတောင်မသိတော့ဘူး။
မခံစားခဲ့ရဘူးပါဘူး ရှင် ကျမတကိုယ်လုံးမှာရှိတဲ့အကြောတွေထဲစိမ့်စိမ့့််
သွားပြီး အသားတွေ တောင်တဆတ်ဆတ်တုန်လာပါတယ်။
အမလေး…..အား….ကျွတ်…ကျွတ်…ကျမ…ကျမလေ…ထွန့်ထွန့်ကိုလူးသွားတာပါဘဲ ကျမအသက်ရှူလို့တောင် မ၀တော့ဘူး
ခေါင်းမြီးခြုံ ကိုဖွင့်ပြီးခေါင်းကိုဘယ် ညာ ရမ်းနေရတော့တာပါဘဲရှင် နိုင်ငံခြားဇာတ်ကားတွေထဲမှာ ဒီလိုမျိုးတွေ
လုပ်ကြတယ်လို့ တော့ကြားဖူးပါတယ် အခုတော့ ကျမကိုယ်တိုင် နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့တွေ့နေရပါပြီ ပါးစပ်ကနေ အသံမထွက်မိအောင် မျက်စိကို စုံမှိတ်ပြီးအံ့ကြိတ်ခံနေရတယ် ကိုထွေးက ဒီလိုတွေ
ကိုညိုမောင်ဒီနေ့ ဘာဂျာမှုတ်ရတာ အခါတိုင်းနဲ့မတူသလိုစိတ်ထဲမှာထင်မိတယ် မိန်းမရဲ့
စောက်ခေါင်းကနည်းနည်းကျင်းသွားသလိုဘဲ အင်းလေ မလိုးရတာကလဲ တပါတ်တောင်ပြည့်တောမှာကိုးကျင်းနေရောပေါ့ စောက်စိလေးကိုဆွဲစုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့
မိန်မရဲ့တကိုယ်လုံး တုန်သွားသလို ဆတ်ဆတ်ခါနေတာကိုလဲတွေ့လိုက်ရတယ် ဒါပေမဲ့စောက်ဖုတ်နံ့လေးကမွှေးနေတာနဲ့ သူ့လျှာကိုစောက်ခေါင်းထဲ တဆုံးဝင်အောင်ထိုးထဲ့ပြီးအကြာကြီးကလိပြစ်လိုက်တယ် ခါးတွေလဲကော့တက်လာပြီဖင်တွေလဲဘယ် ညာ ရမ်းခါသွားတာဘဲ သူမဖင်ကြီးမြောက်တက်နေတဲ့အချိန် ထမိန်ကိုဆွဲချွတ်လိုက်တယ်ခုတော့အောက်ပိုင်းဗလာကျင်းသွားပြီ ကိုညိုမောင်လျှာကြီးကို ချွန်လိုက်ပြီး သူမရဲ့စောက်စေ့လေးကိုကလိလိုက်ပြန်တယ် သူမပေါင်တွေ တဆတ်ဆတ်တုန်လာပြီး
ပေါင်နှစ်လုံးကိုကားပေးလာတယ် အခုမှ စောက်ခေါင်းထဲကိုလျှာကြီးထိုးထည့်ရတာ လွပ်လပ်သွားတော့တယ်မွှေပြီ ကိုညိုမောင် လျှာကြီး သူမ စောက်ခေါင်းထဲမှာခပ်ကြမ်းကြမ်းပင်
ထိုးမွှေလိုက်၏ သူမ အသက်ရှူသံတွေ ပြင်းလာသည်
သူမ၏ နှလုံးခုန်သံတွေတောင် ကြားရလေသည်
စောက်စေ့လေးကို သွားဖြင့်ကြိတ်ပြီး စုတ်ဆွဲလိုက်ပြန်သည်။
သူမဖင်ကြီးနောက်တခါ လေထဲပြန်မြောက်တက်သွားပြီစောက်ဖုတ်ထဲမှ ပူပူနွေးနွေးပျစ်ပျစ်ချွဲချွဲအရည်တွေ ဒလဟော စီးဆင်းထွက်ကျလာပါတော့တယ် ။ ကိုညိုမောင်ကတော့ အလျှော့မပေးသေးဘူး
ကျန်နို့တဖက်ကိုအားပါးတရကုန်းစို့နေယင်း စိတ်ထဲမှာ ထင့်သွားလေ၏ ။
ဟင်……..တခုခုတော့မှားနေပြီဟုထင်သည် ယခုသူကိုင်စို့နေတဲ့နို့တွေက သူ့မိန်းမရဲ့နို့တွေလုံးဝမဟုတ်ဘူး သူ့အထင် အပျိုစင်တယောက်မဟုတ်လျှင်တောင်တခါမျှ
ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားကလဲ တကယ့်မိန်မငယ်လေးတယောက်ဆိုတာ ခုမှသတိထားမိတယ် စောင်ခြုံထဲမှာ မျက်စိကလဲ ကျင့်သားရလာပြီဆိုတော့ သူမရဲ့အသားအရေကလဲ တင်တင်းယင်းယင်းရှိလှသည်ပြီးတော့ အသားကလဲတော်တော်လေးကိုဖြူလိမ့်မည် အမှောင်ထဲမှတောင်ဖွေးဥနေတာဘဲဟုထင်မိသည်
သူဘာဂျာမှုတ်တုန်းကသူမတကိုယ်လုံးတဆတ်ဆတ် တုံနေတာလဲသတိထားမိသည် သူမရဲ့နှလုံးခုန်သံတွေလဲခုတောင် ကြားနေရဆဲ အတွေ့အကြုံမရှိသေးတာလားပြီးတော့ကိုယ်သင်း
ရနံ့ ဒီအနံ့ကသူ့မိန်းမရဲ့အနံ့လုံးဝမဟုတ် ပြီးတော့ရေမွှေးနံ့ဒီရေမွှေးကတော်တော်ဈေးကြီး
လိမ့်မည် ကိုညိုမောင်မိန်းမကဈေးကြီးတဲ့ရေမွှေးမျိုး ကို မသုံးဘူးဆိုတာ ကိုညိုမောင် အသိဆုံး
ဒါဆိုသူမဘယ်သူဖြစ်မလဲ ဘာလို့သူ့အိပ်ယာထဲရောက်နေရတာလဲကိုညိုမောင် သိချင်စိတ်ကပြင်းပျလှသည် ရုတ်တရက် စောင်ခြုံကိုဆွဲဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဖြင့်။
မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းက ကိုညိုမောင် မျက်စိအမြင်များမှလေသလားမဟုတ်ပါကိုညိုမောင်မျက်စိ မမှားပါဘူး အသေအချာပင်နတ်သမီးလေး
နှစ်ယောက်သား တယောက်ကိုတယောက် အံ့သြမှင်တက်ပြီးအကြောင်သားဖြင့်ကြည့်နေမိကြယင်းပြိုင်တူ အာမေဍိတ်သံများ ထွက်လာကြလေ၏
ကျမ ဘယ်လိုမှထင်မှတ် မထားတဲ့အဖြစ် ကျမငယ်ထိပ်ကိုမိုးကြိုးပစ်လိုက်သလိုအရမ်းကို
ကျမကတော့ ကျမယောက်ျားလို့ဘဲထင်ထားတာ ခုတော့ သူစိမ်းတယောက်ကကျမကိုပိုင်စိုးပိုင်နင်း ကျမအပေါ်တက်ခွနေတယ်ကျမအဖြစ်ကလဲ ဆိုးချင်တော့ဒီနေ့ကျမှ တုံးလုံးဖြစ်အောင် ချွတ်ပေးမိတာကိုးကျမယောက်ျားနဲ့ ဘယ်တုန်ကမျှ တုန်းလုံးချွတ်မပေးဘူးပါဘူး ကျမအရမ်းလဲ
ရှက်သွားတယ်လိပ်ပြာလွင့်စဉ်သွားမတတ် ကြောက်လဲကြောက်သွားတာပေါ့ ဖြစ်နိုင်လျှင်ကျမကိုယ်ကိုဖျောက်ပျစ်လိုက်ချင်တာ ခုတော့ သွားပါပြီ ကျမဘ၀တော့ရေတိမ်နစ်ပါပြီ ကျမတကိုယ်လုံးအေးစက်သွားပြီး ချွေးစေးတွေပျံလာပါတော့တယ် ကျမရုန်းကန်ဖို့တောင် အင်အားက မရှိတော့ပါဘူးတုန်တုန်ရီရီဖြင့်
ရှင်….ဘာတွေလာပြောနေတာလဲ ရှင့်အိမ်က ….
ဒီလင်မယားနှစ်ယောက်က သူတို့နောက် အကြာကြီး
တောင် ထင်ခဲ့သေးသည်ကောင်မလေးက တော်တော်လှသည် အသားလေးကလဲဖြူလို့ဝင်းလို့ မသိလျှင် အပျိုလို့ထင်ရမည် တကယ်လဲ အပျိုတွေ
ရှုံးလောက်အောင်လှသည် တင် ရင် ခါးခန္ဓာကိုယ် အချိုးအစား ဘာမျှအပြစ်ဆိုစရာမရှိ ခုတော့ ဘယ်လိုမှထင်မှတ်မထားဘဲဒီကောင်မလေးက ကိုညိုမောင်ရင်ခွင်အောက်ရောက်နေပေပြီ ရောက်နေတာမှဘာအ၀တ်အစားမှ မပါဘဲ
ရောက်နေတာ သူမရဲ့အလှတရားကကိုညိုမောင်ကို ညှို့ယူဖမ်းစားသွားလေပြီ ဒီအခြေအနေတောင်
တောင်လှပြီ ဒါပေမဲ့လဲဝတ်တရားအရ စကားက
ငါ.. မင်းထင်သလို မူးလာတာ မဟုတ်ပါဘူး…. လှေခါးအတက်မှာ သော့…ကျသွားလို့….
တက်ရဆင်းလိုက်ရနဲ့ဘယ်အထပ်ရောက်မှန်းမသိလို့ တတိယထပ်ဘဲငါ့အိမ်ဘဲဆိုပြီးဝင်လာတာ ….
သော့ခတ်မထားရတာလဲ…. မင်းကသာသော့ခတ်ပြီးမှအိပ်နေရင်… ငါတို့
ဒီလိုမျိုး အဆင့်အထိ ဖြစ်လာစရာအကြောင်း
ဘေးနားမှာ အ၀တ်တခုခုကိုရှာလိုက်လေသော် ကျမအ၀တ်တွေအားလုံးကကုတင်အောက် မှာရောက်ကုန်ကြလေပြီ စောစောကခြုံထားခဲ့တဲ့ စောင်ကလဲဦးညိုမောင်ရဲ့နောက်မှာ ဒီလူကြီးကလဲ ကျမကိုကြည့်နေပုံက မျက်တောင်တောင်မခတ်ဘူး ကျမလေ…ရှက်လိုက်တာ သူစိမ်းယောက်ျား တယောက်ကိုကိုယ့်ယောက်ျားအထင်နှင့် ကုတင်ပေါ်မှာဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်ခဲ့ကြပြီးပြီကျမရဲ့
ရင်ခုန်သံတွေကိုတောင် ကျမပြန်ကြားနေရပါတယ် ရှင် ဦးညိုမောင်ပြောနေတာတွေ တောင်
မင်းယောက်ျားက ဒီချိန်ထိမလာသေးဘူးဆိုတော့.. ဘယ်သွားလို့လဲ…။
သြော်…ဒါဆို မင်းယောက်ျား ဒီနေ့ပြန်မလာတော့ဘူးမနက်ဖြန်တောင် ညနေနေအတော်စောင်းမှပြန်ရောက်ကြလိမ့်မယ်။
ရှင်….. ရှင်ကဘယ်လိုကြောင့် အဲလိုပြောနိုင်ရတာလဲ။ငါတို့ပွဲရုံမှာ အဲဒီအောင်ကြီးရဲ့ ညီကိုဝမ်းကွဲရှိတယ် သူအဲဒီမင်္ဂလာလိုက်သွားတယ်။
အဲဒီအောင်ကြီးမိန်မရွာက ဒီကနေ မိုင်၄၀ကျော်လောက်ဝေးတယ် ပြီးတော့…လမ်းကလဲ
ဟင်……ဟုတ်လား ….ကျမက…ကျမယောက်ျား ပြန်လာမယ်ထင်ထားတာ…
ဟေ …ဒီအခြေအနေတောင်ရောက်နေပြီဘဲ နောက်ပြန်ဆုတ်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး
ခုပြန်လာပြီလို့သာ သဘောထားလိုက်တော့ ဟုတ်ပြီလား။
ဟင့်အင်း….ဟင့်အင်း. ..မ….မ…လုပ်ပါနဲ့ …..
သွားပါပြီ ငါ့ဘ၀တော့….ကျမ ဘယ်လိုပင် ငြင်းနေပေမဲ့လဲ မရတော့ပါဘူး ကျမမှာရွေးခြယ်ခွင့်မရှိတော့ဘူးဆိုတာ ကျမ သိလိုက်ရပြီပေါ့ ဦးညိုမောင်က ကျမအပေါ်ကနေ ကားယားခွ ထားပြီးသား လုံးဝဖယ်မပေးပါဘူး ဖယ်မပေးယုံမကပါဘူး သူ့ပုဆိုးကို သူ့ခေါင်းပေါ်မှ ကွင်းလုံးချွတ်လိုက်ပါလေပြှီသူ့လီးကြီးကိုလဲ ကျမမြင်လိုက်ရပါပြီ ။
လောက်ရှိလိမ့်မယ် ညိုညိုမဲမဲကြီး ငရုပ်ကျီပွေ့ကြီး
တယောက်ရဲ့လီးကိုဒါပထမဆုံးမြင်ဘူးတာပါဘဲ ရင်ထဲမှာလဲ ဒိတ်ကနဲဖြစ်သွားတယ်။
အို…ဒါကြီးနဲ့ကျမအလိုးခံရတော့မှာပေါ့ ရင်တုန်နှုံးက ကျမရင်ဘတ်ကြီးပွင့်ထွက်သွားမလား
ဟင့်အင်း … ဟင့်အင်း
ကျမ ကြိုးစားပြီး ရုန်းတယ်။ အားချင်းမမျှတော့ရုန်းမရပါဘူး။ သူ့လက်က ကျမ မလွတ်နိုင်ပါဘူး။ကျမ ဘာပြောရမယ် မသိဘူး အဆွခံထားရလို့ စိတ်တွေလှုပ်ရှားနေပေမဲ့ ဒီဆိုဒ်ကြီးကိုတော့ ကြောက်တယ်ရှင့်။ နောက်ပြီးသူက သူစိမ်းလေ ပါးစပ်ကတော့ ဟင့်အင်း ဟင့်အင်းပဲ အော်နေမိတယ်။ကျမ တကယ်က ဒီလူကြီးကို လည်ပင်းညှစ်ပစ်ရမှာ
အခုကလည်ပင်းမညှစ်ပဲ ပျော့ခွေနေတဲ့လက်တွေက ကျမ မှီနေတဲ့ကုတင်ပေါ်ထောက်ထားပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို တောင်မနဲ ထိန်းနေရတယ်ကျမ အော်လိုက်ရမလား အော်လိုက်ယင်လဲ
ဘာကိုရွေးချယ်ရမလဲ ဝေခွဲလို့မရဖြစ်နေချိန်သူကတော့ သူ့လီးထိပ်ကြီးနဲ့အရည်တွေရွှဲနေတဲ့ကျမစောက်ဖုတ်ကိုဆွဲဆွဲပွတ်နေပါတယ်သူ့လီးနဲ့ ကျမစောက်ဖုတ်ကီုပွတ်မိတိုင်း တကိုယ်လုံး ပျော့ခွေမလိုပဲ ဖြစ်နေတယ်။
ကျမ ဟင့်အင်းနေပေမဲ့ သိပ်မထူးပါဘူး၊ ဦးညိုက ဂရုမစိုက်ပါဘူး။ သူ့လက်တွေနဲ့ကျမပေါင်ကို အတင်းကားခိုင်းပြီး ကျမစောက်ဖုတ်လေးကို အသာဖြဲရင်းသူ့လီးကြီး အတင်းထိုးထည့်နေပါတယ် သူ့လီဲးခေါင်းကကျမစောက်ဖုတ်ထဲကို အတင်းတိုးဝင်လာတယ် သူ့လီးထိပ်ကြီးကဒီလောက်ြ
ကြီးကြီးနေတာ ကျမစောက်ဖုတ်ထဲ ဝင်နိုင်ပါ့မလား ကျမဟာလေးကွဲပြဲကုန်မှာပေါ့….
အင့်..အားးးးး မရဘူး…မရဘူး..
ကျမ ဦးညိုမျက်နှာကို စေ့စေ့ကြည့်နေမိတယ် ။
ဦးညိုက အသားနဲနဲညိုတယ် ကိုထွေးလို
ဆိုရမလား မျက်နှာကျကလဲကြည့်ကောင်းတယ် ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားကလဲယောက်ျားတယောက်ရဲ့ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ အရာအားလုံး အပြည့်ပါဘဲ
ရင်အုပ်ကျယ်ကြီးနဲ့ လက်မောင်းက ကြွက်သားတွေကလဲ အလွန်ပင် သန်မာကြောင်း သက်သေတွေပါဘဲ ။
ကျမ…..သူလက်က ဘယ်လိုမှရုန်းမထွက်နိုင်ပါဘူး။ သူကတော့ မရရအောင်အတင်းလိုးမဲ့ ပုံပါဘဲ ကျမစောက်ဖုတ်ကလဲ အရည်တွေကရွှဲအိုင်နေ
လေတော့ဝင်သွားမှာကိုလဲ စိုးရိမ်မိတယ်။ မ၀င်နိုင်အောင်ကျမအားနဲ့ညှစ်ထားရတာအရမ်း
”ဟာ … ရှင်နော်။ တော်ပြီ””ရှင့်ဟာကြီး မထည့်ပါနဲ့” ရှင့်ဟာကြီးက အကြီးကြီး ၀င်မှာမဟုတ်ပါဘူး”မထည့်နဲ့ … ပြန်ထုတ်ဆို””ဖယ်ဆိုနော်”
ကျမ ပါးစပ်က ငြင်းဆန်နေပေမဲ့ လူကတော့ အလိုက်သင့်လေး အသာငြိမ်နေမိတယ် ဝတ္တရားအရပဲ ငြင်းဆန်နေသလိုပဲ မသိစိတ်ထဲက
တော့သူ့ဟာကြီးနဲ့ ကျမ ထဲကိုဝင်သွားရင်ဆိုပြီး တွေးနေမိလို့လားမသိဘာကြောင့်ရယ်လို့ မသိ ကျမ အတင်းမရုန်းမိဘူး။ ကျမ ငုံ့ကြည့်တော့သူ့ဟာကြီး ၀င်လိုက် ထွက်လိုက်ကို မြင်နေရတယ်။ အစပိုင်းတော့ခေါင်းပိုင်းလေးပါပဲ နောက်တော့ တဖြည်းဖြည်း အထဲကို ပိုပိုရောက်လာတယ်ကျမ ကိုယ်ထဲမှာ သူ့လီးမဲမဲကြီး ၀င်လာတာ ကျမ သိနေတယ် ကျမကိုဆွဲဖြဲနေသလိုပဲ ပြွတ်ကျပ်သိပ်နေပြီး အောင့်သက်သက်နဲ့ နေရလဲ ခက်တယ်ကောင်းလဲကောင်းတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ သူ့ဟာကြီး ကျမကိုယ်ထဲအောင်မြင်စွာနဲ့ထိုးခွဲ
ဝင်ရောက်လာပါတော့တယ် ရှင် သူ့လီးကြီးတဆုံးထည့်လိုက်ပါပြီ ပြီးတော့သွင်းလိုက် ထုတ်လိုက် လုပ်တဲ့အခါမှာတော့ကျမ အမေ ဘုရား အကုန်တနေရပါတော့တယ်။
စိတ်လျှော့ထား သက်သက် တင်းမထားနဲ့…
”ဘယ်လို … တင်းမထားရဘူး ဟုတ်လား…. ကျမယေက်ျား ကိုထွေးနဲ့ ဖြစ်ရမှာရှင့် ရှင်ကြီးနဲ့ မဟုတ်ဘူး။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ကျမ စိတ်လျှော့လိုက်ရပါပြီကျမက်ိုယ်၌က ကာမရဲ့အရသာကိုခံစားချင်နေမိပြီလေ အခု ကျမလုပ်ရမှာကကျမပေါင်နှစ်လုံးကိုအားသကုန်
ကားပေးထားရုံပါဘဲမဟုတ်လား ။ဦးညိုကတော့ အသွင်းအထုတ် မှန်မှန်လုပ်နေပါပြီ။ ခံစားချက်က ထူးဆန်းပြီးကျမအတွက် အရမ်းအသစ်ဖြစ်နေတယ်။ ဆွဲအထုတ်မှာ တမျိုး၊ ပြန်အထည့်မှာတမျိုး။ ခဏကြာတော့ ကျမ သူနဲ့ အလိုက်သင့် လိုက်လှုပ်နေမိလာတယ်။သူအထည့်မှာ ကျမ သူ့ဘက်ကို ကော့ကော့ပေးမိတယ်။ ကျမ အသက်ရှူတွေလဲမှားပြီး ပါးစပ်က ပေါက်ကရ အသံစုံထွက်နေမိပြီ။ ငြင်းဆန်တဲ့အသံနဲ့တော့ နည်းနည်းမှ မတူဘူးရှင့်။
သူတဖြည်းဖြည်း ပိုပိုမြန်လာတယ်၊ ကျမကလဲ အလိုက်သင့်ပဲ ကော့ပေးနေမိတယ်။
သေချာတာကတော့ ကျမ ဒီအရသာထူးကို ထပ်ထပ်ပြီး ငတ်မပြေလောက်အောင်လိုချင်နေတယ်
ဆိုတာပဲ။ မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ ဦးဏှောက်က သိပေမဲ့ အထိအတွေ့ကကျမကို လွှမ်းမိုးသွားပြီ။ ကျမ သူ့စည်းချက်ကို အတင်းအမီလိုက်ပြီး ကော့ပေးရင်းပါးစပ်က တဟီးဟီးနဲ့ ညည်းနေမိတယ်။
သူအားရပါးရ ဆောင့်နေပြီ။ ကျမ လေကို မနည်းလုရှူရအောင် မောနေတယ်၊အထဲကလဲ တချက်တချက် အောင့်အောင့်သွားတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့စည်းချက်အတိုင်းမပျက်မကွက် ကော့ပေးနေမိဆဲပဲ။ ဟင့် … ဟင့် နဲ့ ရှိုက်ရင်း ကော့ကော့ပေးနေတဲ့ ကျမကို …”သက်သက်… နောက်တဆင့် တက်မယ်။” လို့ လှမ်းပြောတယ်။
သူပြောတဲ့ နောက်တဆင့်ကို ကျမသိလိုက်ရပါပြီ။ကုတင်ခေါင်းတန်းပေါ်ကျမကို တွန်းတင်ပြီး ခါးကကိုင်လို့ ကျမကို နောက်ကနေ တဖုန်းဖုန်းဆောင့်တာသူပြောတဲ့ နောက်တဆင့်ပါပဲ။ စောစောကထက် အရမ်းပိုမြန်တယ်၊ အရမ်းပိုပြင်းတယ်။ကျမ လှုပ်မရ၊ ရုန်းမရပဲ တဆုံးဝင်၊ တဆုံးထွက်၊ သူပြုသမျှ အောက်က နုရတာ။ ခံစားရတဲ့ဝေဒနာကို ကျမ ထိန်းမရတော့ဘူး၊ ဆောင့်ထည့်လိုက်တိုင်း ကျမ တကိုယ်လုံးပျော့ခွေထွက်သွားတာ။ ကျမ ဇတ်မခိုင်တော့ပဲ လည်တိုင်က ညာဘက်ကိုစောင်းကျသွားလိုက်၊ ဘယ်ဘက်ကို စောင်းကျသွားလိုက်နဲ့ ခေါင်းကို ခါရမ်းနေရတယ်။နာပေမဲ့ အထဲက တအား ယားတက်လာတာက ပိုဆိုးတယ်၊ ကျမ မခံနိုင်ဘူး။
ပက်လက်ဖြစ်အောင်ပြန်လုပ်တယ် သူကျမစောက်ဖုတ်ကိုသူ့လီးကြီးနဲ့တဆုံး ဆောင့်ဆောင့်သွင်းတယ် သူ့ရင်ဝကို ကျမ တွန်းတယ်၊ တွန်းမရတော့သူ့ပခုံးတွေကို ခံစားရတဲ့ ဝေဒနာ ပြေလိုပြေညား ကျမ ကုတ်တယ်၊ ဖဲ့တယ်။ ပါးစပ်ကအသံတွေ သိပ်မကျယ်အောင် နှုတ်ခမ်းကို ကိုက်ထားတယ်၊ ခြေချောင်းလေးတွေကိုကွေးထားတယ်။ ကျမ ဘယ်လိုပဲ ကြိုးစားပေမဲ့ ယားတက်လာတဲ့ အရသာထူးကိုကျမ ဘယ်လိုမှ မထိန်းနိုင်ဘူး။ ကျမ ပြီးသွားတယ်။ နှုတ်ခမ်းကို တင်းတင်းဖိကိုက်၊
တကိုယ်လုံး တုန်ခါရင်း ချွေးစေးတွေထွက်ပြီး ပြီးသွားတာ။ကျမကသာပြီးတာပါ ဦးညိုကတော့ပြီးသေးပုံ မရသေးပါဘူး သူ့လီးကြီးကခုထိတောင်နေတုန်းပါဘဲ ကျမ စောက်ဖုတ်ထဲမှာတစ်လို့ကြပ်လို့ကျမစောက်ဖုတ်ကြီးကလဲ သူ့လီးကြီးထိုးထည့်ထားလို့လား မသိဘူးခါတိုင်းထက်ပိုပြီး ဖေါင်းကြွနေသလိုဘဲ ကြီးလဲကြီးလာသလိုပါဘဲအစကတော့ သူ့ဟာကြီနဲ့ဆံ့မှဆံ့ပါ့မလားလို့ ဦးညို ရှင်ကြီးက တော်တော်သန်တဲ့လူကြီးဘဲ သူနဲ့ကြမှ ကျမလဲလီးရဲ့အရသာကို ကောင်းကောင်းကြီး သိရတော့တယ် ။
ကိုထွေးက တော့ဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ် ကျမကို အတင်းထမိန်ကိုလှန်ပြီး တန်းလိုးတာဘဲ အခု ဦးညိုလို နှူးနှပ်မနေပါဘူး ပြီးတော့၁၅မီးနှစ်-မီးနှစ်နှစ်ဆယ်လောက်ကျမကောင်းသလိုလိုဖြစ်လာ
ပြီဆိုယင် သူကပြီးသွားပြီ ကျမမှာ ဘာအရသာမှ ကိုမသိလိုက်ရ ဘူး ကျမကိုထွေးနဲ့ပေါင်းလာတာ
၂ နှစ်တခါမျှဒီလိုမျိုး ပြီးသွားတာ မရှိဘူးဘူး ဦးညိုလိုသာကျမကို ကောင်းအောင်လိုးပေးခဲ့မယ်
ဆိုရင်ကျမနေ့တိုင်းပေးမိမှာ အမှန်ဘဲ ။
ကျမမောနေလို့ ဦးညိုက အနားပေးထားထားတာပါ သူကြီး ကကျမကို ဘယ်လိုတွေ လုပ်အုံးမှာလဲ ကျမတွေးမိပြီး စောက်ဖုတ်အတွင်းထဲကတအား
ယားယားတက်လာပြန်ပါတယ် ဦးညိုနဲ့ လိုးရတာ ကျမ ကျေနပ်ပါတယ်လောကကြီးတခုလုံးကို မေ့နေသလိုပါဘဲ ဦးညိုကလဲ ဒီလိုဘဲဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျမကလှတယ်လေကျမလိုမိန်းမလှတယောက်ကို လိုးရတာ ဘယ်ယောက်ျားက များ မကျေနပ်ရှိပါ့မလဲ ဒီတညတော့ ကျမကဦးညိုအတွက်ဘဲပေါ့ဦးညိုရဲ့
စိတ်တိုင်းကျ ကျမလိုးခွင့်ပေးလိုက်တော့မယ် ။
နေတယ် ဒါလဲဖီးတမျိုးဘဲဆိုတာ ခုမှသိရတော့တယ် ကျမခံစားရတာရင်ထဲမှာ တမျိုးကြီးဘဲ နို့တွေကိုအားရပါးရကိုင်နေရာကသူ့လက်တွေ အပေါ်ကိုတက်လာပြန်ပြီ ဦးညို သူ့လက်တွေနဲ့ကျမပုခုံးသားလေးတွေကို ဖွဖွလေးပွတ်ပေးပြန်တယ် ပြီးတော့ကျမကို အသာလေးပွေ့ထူတယ် ကျမလဲအလိုက်သင့်လေးဘဲ ထိုင်လိုက်တယ် သူ့ရဲ့လက်တဖက်က
တယ် ကျမလေကျမကြက်သီးတွေတောင် တဖြန်းဖြန်းထလာပါတယ်ရှင် ။
ဦးညိုရဲ့မိန်းမပြုစုပုံကတော့ အရမ်းညှင်သာပြီး တော်တော်ကျွမ်းကျင်လှပါတယ် ကျမတမျိုးပြီးနောက်တမျိုးခံစားမှုတွေအမျိုးမျိုးကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်ကျမရဲ့ဆံနွယ်လေးတွေကိုသတ်တင်ပြီး ကျမနဖူးလေးကို ပြီးတော့…
ကျမလဲ အသက်ရှုနုန်းတွေမြန်လာရပြန်ပါတယ် ကျမရဲ့နုတ်ခမ်းလေးတွေကို သူ့ပါးစပ်ကြီးနဲ့ငုံခဲထားပြန်ပါတယ်ကျမ လျှာလေးကို စုပ်ယူသွားတော့ ကျမ မနေနိုင်တော့ဘူးကျမ အသံတွေတောင် ထွက် လာရတော့တယ် ။
သြော်,ကိုယ်ပြပေးမှာပေါ့ ဒီလို ကိုယ့်အပေါ်တက်ခွလိုက် …ဟုတ်ပြီ …….
ကိုယ့်လီးကြီးကိုကိုင်လိုက်ပြီးသက်ရဲ့… အဖုတ်ဝကိုတေ့ပြီးထိုင်ချလိုက် …
ဟုတ်ပြီ ဟုတ်ပြီ ၀င်သွားပြီ ………..ကဲ ဆောင့်ပေတော့ဗျစ်….
ကျမဘာကြောင့် သူပြောသလို လိုက်လုပ်ပေးနေမိသည်မသိ ကျမရဲ့ အရည်တွေနဲ့ရွှဲနေတဲ့ သူ့လီကြီးကို ကိုင်ရတာကလဲ ပူပူနွေးနွေးကြီးနဲ့ တမျိုးကြီး ဘဲကျမစိတ်တွေကို ထန်လာစေပါတယ်။
ကျမ ရဲ့စောက်ဖုတ် အ၀ကို ကျမကိုယ်တိုင်တေ့ပြီး ထိုင်ချလိုက်ရတဲ့အရသာကိုတော့ ကျမ တသက် ဘယ်တော့မှမေ့မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူးရှင် ။
ကျမ သူ့အပေါ်ကနေ တက်ဆောင့်ရတာ ချွေးသီးချွေးပေါက်တွေ ကျလို့ပြီတော့
မောလဲမောတယ် သူ့လီးကြီး က ကျမစောက်ဖုတ်ထဲအဆုံးထိဝင်လာတာ ကျမတော့အရမ်းကောင်းနေပြီ ဒီတခါတော့ကျမ ကျိတ်ပြီး မနေနိုင်တော့ဘူး ဖြစ်နိုင်လျှင် ငယ်သံပါအောင်အော်ပြစ်လိုက်ချင်တာ ။
အင်း…..ဟင်း….ဟင်း….အား….ရယ်စရာများဖြစ်နေမလားဘဲ ကျမက အပေါ်ကတက်ဆောင့်ပြီး
ကျမကဘဲအော်နေရတာလေ ကျမ ဆောင့်ယင်း ဆောင့်ယင်းနဲ့အားမရ ၊ အားမရတော့ တအားဆောင့် ၊ တအားဆောင့်တော့ ကျမတအားမောလာပြီ ။
အား……မရတော့ဘူး….ကျမ. …မောလာ ပြီ
ကဲ ကဲအိပ်လိုက်တော့ ကိုယ်ဘဲလုပ်တော့မယ် ပေါင်လေးကိုကားထား…..ဟုပ်ပြီ…… ………ရပြီကောင်းလိုက်တာ သက် ရယ် …
ကိုယ်တော့ အရမ်းကောင်းတာဘဲ ဒီညတော့ကိုယ့်အိမ်မပြန်တော့ဘူးနော်
သူလီးကြီးနဲ့ တအား တအားကိုဆောင့်လိုးနေ
ကြမ်းလှပါတယ် ကျမဆို ခေါင်းတွေကိုဘယ်ညာရမ်း
နေရပြီး မအော်ဘဲကို မနေနိုင်တော့ပါဘူး ပြီးတော့ လောကကြီးတခုလုံးကို ကျမမေ့သွားပြီး ကာမရဲ့အရသာကို နှစ်ခြိုက်စွာဘဲ ခံစား စံစားနေမိပါတော့တယ်ရှင်။
နောက်ဆုံးတော့ သူလဲမရတော့ပါဘူး အား…ဆိုပြီး အော်လိုက်တဲ့ အချိန် မှာ ဘဲ ကျမစောက်ဖုတ်ထဲမှာပြည့်တင်းကျပ်ထုပ်သွားပြီးနွေးကနဲ နွေးကနဲ ကျမခံစားလိုက်ရပါတယ် သူ့အရည်တွေကျမစောက်ဖုတ်ထဲ ပန်းထုတ်လိုက်တာကို ကျမလဲ အတွေ့အကြုံအရသိလိုက်တာပေါ့ ကျမရောသူရော အရမ်းပင်ပမ်းသွားကြပါတယ်နှစ်ယောက်သား တယောက်ကို တယောက်ဖက်ထားကြယင်း အိပ်ပျော်သွားကြပါတော့တယ်ရှင် ။ကျမ အိမ်ထောင်ကျတာ သုံးနှစ်ထဲတောင် ရောက်ခဲပြီ အလိုးခံရတာ ဒီလောက်ကောင်းလိမ့်မယ်လို့ ထင်တောင်မထင်ခဲ့ပါဘူး ဦးညိုနဲ့ကြမှ
ကျမကောင်းမှန်း သိသွားပြီ “ကျမတို့ တရေးနိုးတော့တကြိမ် နောက်မနက်လင်းတော့ တကြိမ် တညထဲသုံးကြိမ်တောင် ကျမဦးညိုကို အလိုးခံခဲ့ရတာ ဒါဘဲလားဆိုတော့မဟုတ်သေးပါဘူး ဦးညိုလေ သူကြီးကသိပ်ဆိုးတယ်ကလေးကြီး
ကျနေတာဘဲ ခုညနေရောက်တာတောင် သူ့ကို တောင်းတောင်းပန်ပန်နဲ့ ပြန်လွှတ်ရတယ်ညနေ ၅ နာရီ ထိုးမှပြန်သွားတာလေ တနေ့လုံး လဲ ကျမကိုလိုးနေတာ အားကိုမရနိုင်ဘူး ကျမကတော့စောက်ဖုတ်ကြီးကို ပြဲလန်နေအောင်ခံရတာသူ့ဟာကြီးနဲ့လေ ကိုယ်ယောက်ျားတောင် တပတ်မှတခါဘဲ
ကျမက ဘာလို့များလိုက်လျှောမိပါလိမ့် သူ့ဟာကြီးကို မြင်လိုက်ယင်ကို ကျမ ရင်တွေခုန်ခုန်လာတာ ဘာကြောင့်မှန်း မသိဘူး နေ့ခင်းကြောင်တောင်မြင်ရတော့ ပိုဆိုးသေးမဲမဲပြောင်ပြောင်နဲ့ ထိပ်ကြီးက မှိုပွင့်ကြီးလိုဘဲ အဲဒီမှိုပွင့်ကြီးက ကျမစောက်ဖုတ် ရဲ့အတွင်းသားတွေကိုချိတ်ပြီးဆွဲဆွဲသွားတာခံလို့
ကျမအဖြစ်ကတော်တော်ဆိုးပါတယ်နေ့လယ်က ရေချိုးခန်းထဲမှာ တသက်နဲ့တကိုယ် တခါမျှ လီးမစုပ်ဘူးတဲ့ ကျမလေ သူ့လီးကြီးကို စုပ်ပေးခဲ့ရသေးတယ် ကျမလေ ရင်တွေကိုတုန်လို့ပူပူနွေးနွေးမာမာခဲခဲကြီး စုတ်လို့တော့ ကောင်းသား စုတ်ပေးပြီးတော့ ကျမ မျက်နှာကို ဘယ်လိုထားရမှန်းကို မသိဘူး ကျမ ရှက်လိုက်တာအင်းလေ သူတောင် ကျမစောက်ဖုတ်ကို စုပ်ပေးသေးတာဘဲ သူစုပ်တာရော လိုးတာရော ခုဆို ကျမ စောက်ဖုတ်တခုလုံး ကျိန်းလို့စပ်လို့ဒါတောင်မှ ပြန်ခါနီးကို နှုတ်ဆက် အလိုးတဲ့ လေ ကျမကိုလိုးဖြစ်အောင်လိုးသွားသေးတယ်
ခုတော့သူလဲပြန်သွားရော ကျမ အိပ်ယာထဲပြန်ခွေနေရတယ် ကျမ တကိုယ်လုံးလဲ ရိုက်ချိုးခံထားရသလိုဘဲနှုံးချိလို့လူမမာတပိုင်းကိုဖြစ်သွားရော ဒီညတော့ ကိုထွေးအတွက် မကျန်တော့ဘူး ကိုထွေးရေ သက်ကို ခွင့်လွှတ်ပါလို့ တော့မပြောလိုတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့လေ သက်ကို ဦးညိုမောင် ဆိုတဲ့လူဆိုးကြီး စားသွားတာခံလိုက်ရတယ်
သက် တကိုယ်လုံးလဲဖွတ်ဖွတ်ကိုကြေလို့ ။